Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan arimaha dacwada - iftineducation.com
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan arimaha dacwada
aadan21 / December 1, 2012
iftineducation.com – Lena Rösell oo ka tirsan urur ka shaqeeya arimaha bulshada oo lagu magacaabo Sociala Missionen, isla markaana aad u caawisa Soomaalida doonaysa in lala mideeyo reerahooda ayaa soo ururisay macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaalada mideynta reeraha Soomaalida.
Lena ayaa ii sheegtay in Laanta socdaalka tiradii ay ka dhawaajisay ee ahayd in 20,000 ay dacwo xareysanayaan aysan sax ahayn oo tiro aad uga yar taas ay ilaa hada xareysteen. Ilaa iyo hada waxaa Laanta Socdaalka ay hawshooda haysaa 4100 dacwo oo ay soo gudbiyeen safaaradaha bariga afrika. Si waqtiga loo yareeyo ayaa safaaradaha waxay wadaan in dheecaanka DNA iyo waraysiga isku mar laga qaado dadka.
Safaarada Sweden ee Kenya oo furantahay bishii July ayaa ilaa hada waxay qabatay 111 dacwo iyadoo DNA laga qaaday ilaa 13 qoys oo keliya. Safaarada Addis Ababa ayaa hawsha ugu badan qabatay iyadoo ilaa hada ay soo gaadhay 7000 dacwo. Ku dhawaad 4000 ayaan ilaa hada kiiskooda la soo gudbin. Safaarada ayaa sheegtay in ay furi doonaan xafiisyo cusub oo dadka wareysiga looga qaado. Waqtiga ay qaadanayso in wareysi laga qaado qofka aan ku jirin dadka muhiimada leh ayaa lagu qiyaasayaa 7 bilood.
Safaarada ayaa sheegtay in ay muhiimada leeyihiin dadka hoos ku xusan. Dadkaan ayaa wareysiga iyo DNA waxaa looga qaadayaa 1 isbuuc.
1. Caruurta ku dhow 18 sano.
2. Caruurta aan la socon waalidkood.
3. Dadka dacwada ka xareystay internetka.
Safaarada ayaa doonaysa in ay warbixin muhiim ah u dirto Soomaalida internetka ka xareystay dacwada. Dadkaas ayaa laga doonayaa in ay safaarada la xiriiraan marka ay dacwada internetka ka xareystaan si balan loogu qabto. Arintaas ayay sheegeen in ay aad muhiim u tahay. Safaarada ayaa sheegtay in aysan iyagu la xiriireyn qofka balse kiiskiisa ay u soo gudbinayso laanta Socdaalka. Qofka aan safaarada la xiriirin ayaa qatar ugu jira in diidmo la siiyo.
Dhinaca kale, Hay’da Laan Qayrta Cas (Röda korset) ayaa sheegtay in ay lacagtii loogu tala galay safarka dadka lala mideynayo reerahooda ee sanadka 2012 ay dhamaatay. Qofka aan haysan sharciga Geneva ayaan wax taageero lacag ah ka heli doonin Röda korset.
Doorka wadaadada iyo nolosha Sweden
Arday kaqalin jebisay jaamacada SIMAD. Daawo Video